गर्भावस्था पछि तपाईंको व्यवसाय सुरु गर्नु अघि सोध्नु पर्ने Key मुख्य प्रश्नहरू - Print Peppermint
गर्भावस्था पछि तपाईंको व्यवसाय सुरु गर्नु अघि सोध्नु पर्ने Key मुख्य प्रश्नहरू
अगस्ट 3, 2020 | DIY, उद्यमी, सुरूवात
गर्भावस्था र मातृत्व लगभग सबै महिलाको लागि जीवन परिवर्तन घटनाहरू हुन्। जिन्दगीको यो नयाँ चरण सुरु गर्न जति सुन्दर छ, यसले धेरै प्रश्नहरू पनि ल्याउँदछ, विशेष गरी यदि तपाईं एक कार्यरत आमा हुनुहुन्छ। धेरै महिलालाई काममा फिर्ता जानु अघि प्रसूति बिदाको केही हप्ता हुन्छ।
हुनसक्छ यी क्षणहरूमा, तपाईं आफैले नयाँ व्यापार सुरु गर्ने सोच्न थाल्नुहुन्छ? वास्तवमा, त्यहाँ एक थोरै डर छ किनकि तपाईं आफ्नो जीवनमा कुनै गतिविधि कहिल्यै चलाउनुहुन्न। तर तपाईको तालिका बनाउने योजनाको विचार, तपाईको टाउको माथि कसैको नभएको, धेरै समय लिनु, र अन्तमा धेरै पैसा धेरै आकर्षक लाग्दछ। हामीसँग प्रश्नहरूको एक सूची छ जुन हामीलाई लाग्छ कि हामीले विचार गर्नु महत्वपूर्ण छ जब तपाईं एक आमा हुनुहुन्छ जब एक व्यवसाय सुरु गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ। तर ठीक पहिले, यदि तपाईं आफ्नो बच्चाको नयाँ नयाँ वर्षको लागि केहि राम्रा चीज खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुन्छ बच्चा गियर बजारको संख्यामा, जस्तै शीर्ष-आमा।
हामी यहाँ छौं कि तपाईंलाई भन्नुहोस् एक व्यापार सुरू गर्न कुनै जटिल छैन, तर तपाईंले चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ जुन तपाईंले सामना गर्न सक्नुहुनेछ। यो हामीले सुरूवात गरी राख्नु भएको व्यापार चेकलिस्ट अरू महिलाहरूको अनुभवबाट बाहिर आयो जसले आफ्ना बच्चाहरूसँग पर्याप्त समय चाहन्छ तर घर आमाहरूमा बस्न चाहँदैनन् र आर्थिक आश्रित छन्। तसर्थ, तिनीहरू पर्याप्त साहसी थिए र व्यवसाय सुरू गर्ने प्रयासमा लागे।
हामी आशावादी छौं कि ब्यापार सुरू गर्नका लागि यी चरणहरूले तपाईंको साहसिक कार्यमा मद्दत गर्दछ।
म के दिदैछु?
तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि तपाईं जस्ता धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको काममा स्वतन्त्र हुन आवश्यक महसुस गर्दछन्, र यसले गहन प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दछ। यो मानिसहरूलाई कसरी उपयोगी हुनेछ? यो कसरी समान अन्य उत्पादनहरू / सेवाहरू भन्दा फरक छ? यदि तपाईं यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईं ड्रइंग बोर्डमा फर्कनु पर्छ। राम्रो व्यवसायको लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खुजली हुनु हो जुन तपाईं स्क्र्याच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
मैले कति पैसा लगानी गर्न आवश्यक छ?
चाहे तपाइँ घर व्यापार शुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा अरू केहि, तपाइँले लगानी गर्न कति पैसा चाहिन्छ भनेर विचार गर्नु आवश्यक छ। जुनसुकै सेवाहरू वा उत्पादनहरू तपाईंले बिक्रीको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले भाँडा, करहरू, र यस्तै चीजहरूमा फ्याक्टर गर्नु पर्छ। यो तपाइँको वित्त मा ठप्प हुन सक्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले बेवास्ता गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ, यदि तपाईंलाई पक्का विश्वास छ कि फिर्ती एकदम बढी छ। सुरुबाट debtणमा पर्नबाट जोगिन, सुरुमा अनलाइन व्यवसाय सुरू गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्।
के म प्रतिबद्ध गर्न तयार छु?
आजकल, हामी सबै काम गर्न को एक विशाल राशि को साथ अभिभूत छौं, र सबैजनाले छोड्न सोच्दै छ र उडान एकल। तर यो एक प्रेम भन्दा अधिक लिन्छ के तपाईं सफल हुन जब तपाईं एक व्यापार शुरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले सुरुमा कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ, र यसको लागि केही बलिदानहरू आवश्यक पर्दछ। के तपाईं तिनीहरूलाई बनाउन र तपाईं आफूले चाहेको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ?
मेरो कोर मूल्यमान्यता के हो?
यदि यो तपाइँलाई स्पष्ट छ, यो तपाइँको ग्राहकहरूमा पनि स्पष्ट हुनेछ। तपाईं के हासिल गर्न चाहानुहुन्छ भनेर निश्चित हुन आवश्यक छ र यसलाई राम्रोसँग सञ्चार गर्नको लागि। सब भन्दा सजिलो कुरा सुरूबाट स्पष्ट मानहरू स्थापना गर्नु हो र तिनीहरूमा टाँसिनु हो।
के म मेरो ग्राहकहरु लाई चाहान्छु?
मानौं तपाईं गर्भवती महिला वा नयाँ आमाहरूका लागि लुगा बेच्न कपडाको कारोबार शुरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंसँग अनुभव छ जब तपाईं महिलाहरू कसरी सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा सोचिरहनुभएको छ तपाईंको पेटमा भरोसा राख्नुहोस् र उनीहरूले तपाईंलाई बताउनु अघि भविष्यवाणी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं के चाहानुहुन्छ, के तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी लाग्ने कुराको बारेमा सोच्नुहोस्, र त्यहाँबाट सुरू गर्नुहोस्। यसले तपाइँको ग्राहकहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु को अनुभव को कल्पना गर्न को लागी मद्दत गर्दछ, र तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँलाई र के सुधार गर्न पर्छ।
के म सोशल मीडिया श्रोतहरू उनीहरूको पूर्णमा प्रयोग गर्दैछु?
हामी सामाजिक मिडिया विस्फोटको युगमा बाँचिरहेका छौं, र यदि तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, र अन्यमा हुनुहुन्न भने सफल व्यवसाय हुन कुनै तरिका छैन। चाहे तपाईं एक स्टोर मालिक हो वा घर बाट एक व्यापार शुरू, त्यहाँ कारणहरू छन् तपाईंको प्रयोगमा रहेको सबै प्रयोग गर्न। अधिक तपाईलाई देखीएको र सुन्नुहुन्छ, तपाईको सफलताको संभावना बढि छ।
के मलाई थाहा छ निराशाको सामना कसरी गर्ने?
यो निश्चित रूपमा तपाईले सोच्न चाहेको कुरा होइन जब तपाई ब्यापार सुरू गर्दै हुनुहुन्छ। तर जति कठिन छ, यो तयार हुनु आवश्यक छ कि चीजहरू सँधै सहज हुँदैनन्। महिला उद्यमीहरूको हैसियतमा हामी प्राय जसो पुरुष संसारमा पौडी खेल्ने क्रममा अधिक चुनौतीहरूको सामना गर्दछौं। यो ग्रह अझै पनि कट्टरपन्थी ठाउँ भएको कारण धेरै मानिसहरू सोच्दछन् कि आमाले आफ्ना बच्चाहरूको देखभाल गर्नुपर्छ र काम गर्दैन, र तिनीहरूले हाम्रो असफलताको लागि कुर्छन्। तिनीहरूलाई सन्तुष्टि नदिनुहोस्। जान्नुहोस् कि चीजहरू कठिन हुन सक्छन्, तर यदि तपाईं दृढ हुनुहुन्छ र पर्याप्त उत्साहित हुनुहुन्छ भने, तपाईं सबै अवरोधहरूलाई पार गर्न सक्नुहुन्छ र सफल व्यवसाय बनाउन सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईंले देख्नु भएको छ कि व्यापार सुरू गर्नु त्यति गाह्रो छैन। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन जुन तपाईंको लगत र अठोटलाई राख्छ। त्यहाँ धेरै महिला छन् जसले यसलाई बनाए र रोल मोडेलहरू हुन सक्छन् जुन तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ जब तपाईंलाई लाग्छ जब तपाईं प्रेरणा हराउनुहुन्छ। के तपाईंले आफ्नो आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नेबारे सोच्नुभएको छ? के तपाईंसँग केहि अन्य सुझावहरू छन् जुन सहयोगी हुन सक्छ?
एलिजाबेथले सुन्दर बच्चा गर्भवती भएको छ महिना पछि जागिर छोडिदिए। अब उनी पुस्तक पसलको मालिक, एक ब्लगर हो, र कहिलेकाँही लेख लेख्छिन् शीर्ष आमा। एलिजाबेथ महसुस गर्छिन् कि धेरै महिलाहरूले कामहरू सिध्याउँदछन् किनभने तिनीहरू आफैले व्यापार जगतमा प्रवेश गर्न आत्मविश्वास खोज्दैनन्, र उनी त्यो परिवर्तन गर्न चाहान्छन्।
App अपोइन्टमेन्ट समय तालिका सफ्टवेयरको साथ कसरी शुरू गर्ने: परिभाषित गाईड
वापसी योग्य ब्यानर: यूनिवर्सल विज्ञापन उपकरण →